भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हातले पन्छाएर उद्धार! | Nagarik News - Nepal Republic Media
भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हातले पन्छाएर उद्धार!
दशकौँको आन्तरिक युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तान प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको छ। बुधबारको भूकम्पले देशका धेरै भूभाग क्षतविक्षत भएका छन्।
भूकम्पमा परी एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र एक हजार पाँचसयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइते तथा मृतकको संख्या बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पक्तिका प्रान्तको गायन जिल्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ।
भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेषमा मानिसहरूको खोजी भइरहेको छ। बाँचेकाहरू घरायसी उपकरण लिएर खोजी तथा उद्धारमा जुटेका छन्। उनीहरू हातले भग्नावेशष हटाइरहेका छन्। तालिबान र उनीहरूको नियन्त्रणबाट भागेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भूकम्प पीडितहरूलाई सघाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
बढ्दो गरिबी र भोकमरीका बीच थपिएको यो विपत्तिमा अफगानीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मुख ताकेर बसेका छन् भने बाह्य सहायता पनि मन्द गतिमा प्राप्त हुन थालेको छ। छिमेकी पाकिस्तानबाट केही राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। दश महिनाअघि उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) र अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै देशको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको छ।
तालिबान शासन सुरू भएयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पनि लगभग रोकिएको छ। भूकम्प पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताका निम्ति आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले भग्नावशेष हातले पन्छाएर पुरिएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न कठिन हुने पीडादायी परिस्थितिबारे जानकारी पनि गराएका छन्।
प्रकाशित: ९ असार २०७९ १४:०६ बिहीबार
अफगानिस्तान भूकम्प तालिबान
यौन हिंसाका चर्चित मुद्दामा अपराध पुष्टि गर्न कठिनाइ
जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल भने प्रमाणको कमी भन्ने विषय स्विकार्न तयार छैनन्। घटनाहरूमा प्रमाण जुटेकै कारण मुद्दा अगाडि बढेको र त्यसैअनुसार अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई जेल पठाएको उनले बताए।
सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै वायुसेवा सञ्चालक संघ
वायुसेवा सञ्चालक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको हो।